Ny fepetra momba ny fitomboan&#39;ny mpianatra na ny mpianatra dia kendrena ho lasa mahay, na mihazona fahaiza-manao, ny fenitra akademika anglisy / fiteny sy matematika ao anatin&#39;ny efa-taona. Ny fitomboan&#39;ny Percentile an&#39;ny mpianatra (SGPs) dia ampiasaina hamaritana raha toa ka manao fivoarana ampy isan-taona ny mpianatra hahatratrarana ireo tanjona ireo. Ny SGP dia mamaritra ny fianarinan&#39;ny mpianatra iray raha oharina amin&#39;ireo mpianatra hafa mizara ny tantaram-piainana mitovy amin&#39;ilay mpianatra, na ireo &#39;namana ara-pianarana&#39; ho an&#39;ny mpianatra. Ny mpianatra manana valim-panombanana roa misesy ihany no nandany ny ankamaroan&#39;ny taonan&#39;ny sekoly nisoratra anarana tao an-tsekoly no tafiditra ao anatin&#39;ny fitaterana ny fitomboan&#39;ny mpianatra. (Loharanom-baovao: taom-pianarana 2018-2019)
Firy isan-jaton&#39;ny mpianatra Indiana no nifanena na nihoatra ny tanjon&#39;izy ireo isan-taona?
Fepetra ny fitomboan&#39;ny mpianatra na mikendry ny ho lasa mahay na mihazona fahaiza-manao amin&#39;ny fenitra anglisy / fiteny Siansa sy matematika ny mpianatra.
Zavakanto / teny anglisy
Zavakanto / teny anglisy Gresy 3-8
Zavakanto / teny anglisy Grades 10
Seho amin&#39;ny fampisehoana ambany indrindra amin&#39;ny 25% an&#39;ny mpianatra 3-8
Zavakanto / teny anglisy Seho amin&#39;ny fampisehoana ambany indrindra amin&#39;ny 25% an&#39;ny mpianatra 3-8
Matematika Gresy 3-8
Matematika Kilonga 10
Fampisehoana fahalemana ambany indrindra amin&#39;ny 25% -n&#39;ny Mpianatra ny ambaratonga 3-8
Matematika Fampisehoana fahalemana ambany indrindra amin&#39;ny 25% -n&#39;ny Mpianatra ny ambaratonga 3-8
Ahoana no ataon&#39;ireo mpianatra Indiana raha ampitahaina amin&#39;ny kendren&#39;ny fanjakana ho an&#39;ny fivoaran&#39;ny teny anglisy / fiteny sy matematika any amin&#39;ny fahaiza-manao?
Ny kendrena interim dia manondro fivoarana ilaina amin&#39;ny fanatrarana ny tanjona maharitra amin&#39;ny fanjakana ho an&#39;ny fitomboana mankany amin&#39;ny fahaiza-manao.
Inona ny fitomboan&#39;ny medianika isan-karazany?
Ny fitomboan'ny Percentile an'ny mpianatra dia maneho ny habetsaky ny fivoaran'ny mpianatra vita amin'ny taona iray raha oharina amin'ireo mpianatra hafa manana tantaram-piainana mitovy amin'ny zava-bita akademika.
(Eo ho eo)
Angovo anglisy / fiteny ara-tsimokaretina mediansy Gresy 3-8
Zavakanto anglisy / Fiteny medianina fitomboana 10 taona
Gredth Grédical Percentile Grades 3-8
Grika faha-10 taona manaraka ny matematika Grika